Famoahana gazety - Apicmo cdmo Manufacturers
APICMO dia mpamatsy fitaovana amin'ny fomba amam-panao sy fitaovam-pandevozana ary ny fifanarahana R & D
ny Fomba Fiasa
Fomba amam-panao manokana sy fifanarahana R & D
Famokarana kely sy lehibe
Fananganana toeram-pamokarana ho an'ny zava-mahadomelina
Ny F & F sy ny fivoarana vaovao
Ny 2019 CNS Fitsaboana ny Tazomoka Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Brain (37758-47-7)
06 / 05 / 2019Posted by: APICMOSokajy: Fahalalàn-jaza0 Likes
Fantaro ny anjara asan'ny GM1 ao amin'ny fioriolojia momba ny neurolojia, ny toetrany fanoherana ny fahanterana, ary ny fiantraikany eo amin'ny rafi-pandrefesana sy ny rafi-pandrefesana.
Inona ny Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1)
Ny natiora Monosialotetrahexosylganglioside dia odiatrophique électriène izay misy ny fisoratana anarana GM1. Continue Reading
Ny Tokony Hahafantaranao ny Pyridines
08 / 30 / 2018Posted by: APICMOSokajy: Fahalalàn-jaza0 Likes
Ny pyridine no fototry ny heterocyclic fototra amin'ny hatsarana azine. Ny pyridine dia avy amin'ny benzène amin'ny fanoloana ny vondrona CH ataon'ny N-atom. Ny rafitra Pyridine dia mifanandrify amin'ny rafitry ny benzène, satria mifandraika amin'ny fanoloana ny tarika CH by N. Ny fahasamihafana lehibe dia ahitana:
Ny heterocycles mihetsiketsika indrindra any an-tany
08 / 28 / 2018Posted by: APICMOSokajy: Fahalalàn-jaza0 Likes
Ny fikambanana heterocyclic, fantatra amin'ny anarana hoe rafitra ring ihany koa, dia singa iray izay misy atôma misy singa roa miavaka amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny peratra / peratra. Ny heterocyclic dia mety ho ny fahasamihafana indrindra sy ny isa be indrindra amin'ny fianakaviana mifandray amin'ny organika.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vovoka spiro
Ny fitambaran'ny spiro dia singa ara-biôlôjiana izay ahitana rôbika roa mitambatra amin'ny atoma tokana. Ny natiora dia mety ho mitovy na hafa ny rafitra misy ny peratra, ary ny atôma izay mampifandray ireo peratra roa dia antsoina hoe spiroatom (atomika), matetika dia karazana 4 (fantatra ihany koa amin'ny karba-drala), ary dia silisy, phosphor, na arsenika koa
2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (sampan-tsifin'ny Chemical Abstracts Services) Registry Number 22536-61-4
08 / 18 / 2018Posted by: APICMOSokajy: Fahalalàn-jaza0 Likes
Ny 2-Chloro-5 methylpyrimidine dia manana endri-tsoratry ny kiran-kiran-jiro mavo matevina amin'ny efi-trano. Ny sasany dia mamaritra ny aloky ny loko toy ny tsy fotsy. Tsy misy fofona sy molekiolan'ny volon-koditra 128.56 isaky ny molotra. Ny fehezanteny momba ny simika dia voamarina amin'ny C5H5CIN2 sy ny rafi-dalan'ny fangalana molekiola (SMILES) toy ny CC1 = CN = C (CL) N = C1. Ny votoatiny dia misy teboka miovaova eo anelanelan'ny 89-92 degrees centigrade, ary ny teboka manify amin'ny 239
07 / 19 / 2018Posted by: APICMOSokajy: CMO votoaty1 Comment0 Likes
Mihoatra ny taona 10 taona niasana teo amin'ny sehatry ny famokarana organika simika, niasa tao amin'ny GSK, tompon'andraikitra amin'ny fivarotana any Amerika Avaratra, dia nahavita vokatra tsara.
07 / 18 / 2018Posted by: APICMOSokajy: CMO votoaty1 Comment0 Likes
Nahazo diplaoma avy amin'ny Departemantan'ny chemema organika, Stanford University, Stanford University
07 / 18 / 2018Posted by: APICMOSokajy: Fahalalàn-jaza1 Comment0 Likes
Ny fahaiza-manao tsara indrindra amin'ny toetoetran'ny firafitry ny heterocyclic composites. Miorina mafy amin'ny fampiasana ny fanangonam-pandehanana sy ny fahaiza-manaony mifandraika amin'ny synthesis of benzonitrile, phenol, naphthol, coumarin, thiocoumarin, quinoline, quinozoline, pyrimidine, pyridine, indole, indazole, Imidazole sy benzimidazole.
Sokajy Select Category CMO votoaty Fahalalàn-jaza
Archives Select Month Jona 2019 Aogositra 2018 Jolay 2018
APICMO dia orinasa pharmaceutique izay mamorona ny fampifangaroan'ny zava-mahadomelina vaovao. Izy io dia mifantoka amin'ny famolavolana rafitra sy fomba fitsaboana manontolo ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana fanafody ary ny orinasa pharmaceutika.
Ny singa kiraly
Fomba amam-panao manokana sy fanadihadiana R & D
Fomba amam-pandaharana madinika sy mavesatra
Building D, 2 ety, No. 128, Xiangyin Road, Yangpu District, 200433, Shanghai, Sina